Hogaamiyaha Maamulka Hirshabeele Oo u Tahniyadeeyey ciida Carafo Shacabka Hirshabeele iyo dhamaan shacbiweynaha Soomaliyeed – hareerley News
War qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Madaxtooyada Hirshabelle ayaa lagu yiri Hogaamiyaha Dowladda Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare oo ku hadlayay Afka Golayaasha Dowladda Hirshabelle ayaa waxaa uu Hambalyo ku aadan Munaasibadda Ciidul Adxaa u diray dhammaan umadda muslimiinta iyo umadda Soomaaliyeed gaar ahaan Reer Hirshabelle.
Hogaamiyaha ayaa sheegay in maalmaha farxadeed awgeed loo baahan yahay inay is cafiyaan dhammaan umadda Soomaaliyeed, islamarkaana laga farxiyo dadka danyarta ah iyo ubadkeena soo koraya.
‘’Illaah waxaan ka baryayaa in sanadkaan sanadkiisa kale nagu gaarsiiyo Nabad-gelyo, Horumar, Wadajir , Midnimo iyo inaan ka shaqeyno midnimadeena iyo horumarkeena ‘’ Ayuu yiri Hogaamiye Waare.
‘’Waxaan rajeynayaa in Soomaaliya wanaagsanaato, in Soomaaliya horumarto, in Hirshabelle meesha ay hada joogto sanandka dambe meel ka fiican ay gaarto dhanka horumarka iyo nabad-gelyada ‘’ Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Hogaamiye Waare.
Hogaamiyaha Dawladda Hirshabelle waxaa uu sidoo kale baaq nabadeed oo ku aadan joojinta colaad beeleedyada mararka qaar Hirshabelle ka dhaca in lagu bedelo walaalnimo iyo wax wada qabsi.
‘’Waxaan rajeynayaa in caqligu shaqeeyo , waxaana rabaa inaan ku booriyo cilimo udiinka, madax dhaqameedka, ganacsatada , waxgaradka reer Hirshabelle inay u kacaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen Horumarinta Dowladnimada’’ Ayuu yiri Madaxweynaha Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare.
Diyaargaroowga Qaban qaabada soo dhoweynta Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa hadda ka socota garoonka kubbadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed. Kheyre ayaa lagu waddaa in Garoonka uu kula hadlo dadweynaha, islamarkaana uu sharaxo U jeedda Safarkiisa iyo qorshaha dowladda ee horumarinta degaanada maamulka Koonfur Galbeed.